Waraaqaha waraaqaha ee cusub ee OnePlus 6T ayaa hadda la heli karaa | Androidsis
Waraaqaha waraaqaha cusub ee OnePlus 6T ayaa hadda la heli karaa
Sida jadwalka loo qorsheeyay, in kasta oo ay ahayd inay shirkaddu horay u sii mariso taariikhda xareynta hal maalin si aan ugu habboonayn munaasabada soo bandhigida in Apple lagu qabtay dhowr saacadood, shirkadda OnePlus waxay si rasmi ah u soo bandhigtay shirkadda cusub ee OnePlus 6T, terminal na siiya tiro badan oo isbeddello ah marka loo barbar dhigo kii ka horreeyay.
Midka cusub OnePlus 6T waa la tixgelin karaa jiil cusub oo ka baxsan nooca caadiga ah ee ay bixiso T-ga, maaddaama oo keliya cabbirka shaashadda la ballaadhiyey, laakiin sidoo kale aaladda dareeraha faraha ayaa lagu soo dhex daray hoostiisa, oo ah meel dhowaan u noqon doonta midda caadiga ah ee qalabka badankood.
Androisis waxaan horeyba ugu degnay inaan ka shaqeyno si aan kuugu wargalinno dhammaan wararka laga heli karo terminaalkan, waxaa kuu sii dheer a isbarbardhigga udhaxeeya OnePlus 6 iyo OnePlus 6T. Waxaan sidoo kale ku dhejinay awoodeena, iyada oo loo marayo qodobkan, dhammaan waraaqaha waraaqaha ee ka imanaya gacanta terminalkan cusub saxiixa. Haddii aad rabto inaad soo dejiso iyaga, markaa waxaan kuu sharraxeynaa sida loo sameeyo iyadoo la raacayo dhowr tallaabo oo fudud.
Mar labaad, OnePlus wuxuu ku tiirsanaa Hampus Olsson si loo daryeelo naqshadeyso waraaqaha derbiga ee jiilka cusub ee OnePlus. Munaasabaddan, waxaan awoodi doonnaa oo keliya inaan ku raaxeysano saddex sawir oo cusub, kuwaas oo lagu heli karo 2k + iyo 4k. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale ka heli doonnaa, nooca 2k, qoraalka la socday OnePlus sannadihii la soo dhaafay: Marna Seetle
Dhammaan waraaqaha darbiga ayaa laga heli karaa soo dejinta adiga qaraarka asalka ah, taas oo kuu oggolaan doonta inaad si toos ah ugu adeegsato qalabkayaga.
Haddii aad jeceshahay sawir-gacmeedka, waxaan kugula talineynaa inaad soo booqato qaybtayada Waraaqaha loogu talagalay Android, waa hubaal inaad jacayl u qaaday in ka badan hal 😉
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Waraaqaha waraaqaha cusub ee OnePlus 6T ayaa hadda la heli karaa
Sida loo wadaago sawir fariin gaar ah barta Instagram
Sida loo tirtiro kuwa raacsan koontadaada 'Instagram'